WARBIXIN: Shantii Xilli Ciyaareed Ee Ugu Fiicnaa Taariikhda Kubada Cagta England – Sidee Ayay Ula Dhigantaa Man City Kooxahaas? – Kooxda.com
Home 2018 April Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Shantii Xilli Ciyaareed Ee Ugu Fiicnaa Taariikhda Kubada Cagta England – Sidee Ayay Ula Dhigantaa Man City Kooxahaas?
WARBIXIN: Shantii Xilli Ciyaareed Ee Ugu Fiicnaa Taariikhda Kubada Cagta England – Sidee Ayay Ula Dhigantaa Man City Kooxahaas?
Kooxda Man City ayaa hanatay horyaalka premier League kadib markii ay guuldaro soo gaartay kooxda ay jaarka yihiin ee Man United.
City ayaa wali dhaafi karta rikoorkii chelsea ee dhibcaha horyaalka premier League maadama ay wali 5 kulan ka harsan yihiin dhamaadka horyaalka.
City ayaa kaliya laga badiyay hal kulan ilaa haatan xilli ciyaareedkan iyaga oo badiyay 19 kulan oo ka mid ah 20-kii kulan ee ugu horeeyay horyaalka.
Hadaba sidee ayay ula dhigmaan kooxihii horay ugu soo guulaystay horyaalka premier League?
Waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 5-tii xilli ciyaareed ee ugu fiicnaa horyaalka England.
North End ayaa horyaalka oo 22 kulan ahaa ku qaaday bilaa guuldaro xilli ciyaareedkii 1888/1889-kii.
Inkasta oo ay sidaas sameeyeen wakhtigii uuna horyaalka lagu magacaabi jirin Premier League hadana rikoorkooda ayaa ah mid ku qoran taariikhda horyaalka heerka 1-aad.
Preston ayaa badisay 42 kulan oo xiriir ah sanadkii 1887/1888 intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkaas waxa ay sidoo kale ku guulaysteen FA Cup-ka iyaga oo aan wax gool ah laga dhalin.
Laga bilaabo 1970 ilaa bartamihii 1980 Liverpool ayaan kaliya ahayn kooxda ugu fiican England laakiin waxa ay sidoo kale ahayd kooxda ugu fiican yurub waxana ay xilli ciyaareedkoodii ugu fiicnaa qaateen 1983/1984.
Tababare Joe Fagan ayaa wakhtigaas dhaxlay koox ku guulaystay laba jeer oo xiriir ah horyaalka oo wakhtigaas la odhan jiray championship waxana uu intaa kooxda u sii raaciyay 3 koob oo kale halka uu sidoo kal 4 jeer oo xiriir ah kooxda kula guulaystay League cup-ka iyo waliba koobkii 4-aad ee yurub iyaga oo rikoorayaal kaga qaaday kooxda Roma.
Wakhtigaas ayaa ahaydn markii uu halyeeyga Liverpool ee Ian Rash dhaliyay 47 gool xilli ciyaareedkaas.
Man United ayaa wakhtigaas qaadatay xilli ciyaareedkoodii ugu fiicn iyaga oo wakhtigaas ku guulaystay 3 koob oo kala ah Premier League, Champions League & FA Cup.
Sir Alex Ferguson ayaa si fiican ugu faraxsanaa kooxdiisa isaga oo haystay koox adag oo ku tartamaysay koobab badan waliba soo bandhigaysay qaab ciyaareed fiican kuna caan baxday wakhtigaas in ay samayso soo laabasho cajiib ah oo kulamada ah.
Waxa ay kulankoodii ugu fiicnaa la ciyaareen Bayern Munich kulan final ahaa oo ka dhacay Barcelona iyada oo xiddigaha Teddy Sheringham & Ole Gunnar Solskjaer ay dhaliyen goolal wakhtigii dheeriga ahaa.
Marka laga hadlo Casriga Premier League Kooxda Arsenal ee 2003/2004 ayaa ahayd kooxdii ugu fiicnayd maadama ilaa haatan la jabin laayahay rikoorkii guuldaro la,aanta ee ay ku qaaday horyaalka premier League.
Thierry Henry ayaa 30 gool dhaliyay waxana uu Wenger kooxdiisa ku haystay xiddigo kooxda 1-aad ah oo badankoodu saftay 28 kulan xilli ciyaareedkii dhamaa.
Gunners ayaa la kulantay bar-baro 12 kulan oo kaliya waxana ay inta kale gaareen guul iyaga oo ahaa kooxdii ugu fiicnayd horyaalka xilli ciyaareedkaas.
City ayaa haatan isha ku haysa in ay gaarto dhibcaha 95 oo ay kooxda chelsea ku qaaday horyaalka premier League xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee Jose Mourinho.
Blues ayaa lahayd difaac bir ah iyaga oo kaliya laga dhaliyay 15 gool xilli ciyaareedka oo dhan waxana ay sidoo kale dhaliyeen 72 gool iyaga oo shaki la,aan ah kooxdii ugu weerarka fiicnayd ee uu abid mourinho soo tababro.
Chelsea ayaa sidoo kale ku guulaystay League cup-ka waxana ay sidoo kale ahaayeen qaar adag dhanka yurub iyaga oo tartanka ka reebay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ka hor inta ayna tartanka kaga harin Semi-finalkii kadib guuldaro ka soo gaartay Liverpool.